ပထမအကြိမ် အဓိကသက်ဆိုင်သူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနေ့) | ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ပထမအကြိမ် အဓိကသက်ဆိုင်သူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနေ့)
ဦးအောင်ပြည့်မြတ် မြို့နယ်ဒုဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်ထွေ/ အုပ်
ဦးစိုင်းစံအေး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တိန်းလုံကျေးရွာ
ဦးစိုင်းလှိုင်းဆိုင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပန်ခမ်းကျေးရွာ
ဒေသခံပြည်သူများ ၁၁၅ ဦး
စိုင်းအုန်းမြင့်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး အခမ်းအနား ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပဏာမ ဆွေးနွေး တင်ပြပါသည်။ ယနေ့ ဟိုပေါ့ကျေးရွာ၊ လူငယ်ဇရပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ် စစ်စီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အဓိကသက်ဆိုင်သူများ/ ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတွင် နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ထားမှုအား ချပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ချက်များ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည် ဖြစ်၍ ဝိုင်းဝန်းဖြည့်စွက် အကြံဉာဏ်ပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ယနေ့ လာရောက် ဆွေးနွေးတင်ပြသည့် စီမံကိန်း အကြောင်းအရာနှင့် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အချိန်ကာမှာ ၁-နှစ်ခွဲခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ် ဆိုသော်လည်း လုပ်ငန်း ပမာဏ မသေးနေသဖြင့် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းကို သေချာ ကောင်းမွန် ခိုင်ခန့်အောင် အဖက်ဖက်မှ ကြည့်ရှု ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အချိန်ယူပြီး လုပ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူများကို တင်ပြရာတွင် ဒီဇိုင်းမပြီးစီးပါက အပြောသက်သက်သာရှိပြီး ဘယ်လို အကျိုးရလဒ်တွေ ရှိမလဲဆိုတာ ပြောပြလို့ မရပါကြောင်း၊ ယခုအခါတွင် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းပြီး စီးသွားပြီ ဖြစ်၍ အကြမ်းအားဖြင့် သိရပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို သိလာရတဲ့ အချိန်ကာလမှာ တတိယ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာစဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အင်ဂျင်နီယာ (MSDES) ကုမ္ပဏီကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှုကို ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ (MSDES) အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ဆွေးနွေးတင်ပြမည်ဖြစ်၍ MSDES အဖွဲ့နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုကြောင်း ပြောပြီး MSDES အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ စိုင်းအုန်းမြင့်မှ မိမိတို့ဂ ရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုကြောင်း၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီသည် မူဆယ်မြို့၊ ကောင်းမူးလွယ် ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိကြောင်း၊ အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆိုသည်မှာ ယခု အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အများပိုင် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်၍ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြရန် မိန့်ကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၁၂.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အများပိုင် ကုမ္ပဏီကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တည်ထောင်ပြီးပြီးချင်း ဧက ၃၀၀-ခန့်ရှိသော မူဆယ်မြို့၊ ဗဟို စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း၊ နယူးစတားလိုက် ကုမ္ပဏီတွင် (Main) ပင်မကန်ထရိုက်တာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်ထိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ အဖြစ် လမ်း၊ တံတား၊ မီး၊ ရေလုပ်ငန်း ၇၅% ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တည်ထောင်ပြီး ၆-လခန့်တွင် မိမိတို့ ဒေသ၏ သဘာဝ အရင်းအမြစ်အား အသုံးချပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ စူးစမ်း လေ့လာကြည့်သောအခါ ပထမ နမ့်ပေါ်ချောင်းကို တွေ့ရှိပြီး ဒုတိယ နမ့်ခိုင်ချောင်း၊ တတိယ နမ္မတူမြစ် စသည့် သဘာ ဝသယံဇာတတွေကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ပါက ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာ အများကြီးရှိကြောင်း၊ အများပိုင် ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈-နှစ်ပြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မည်သူမဆို ပူးပေါင်း ပါဝင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးတစ်ယောက် အင်အားဖြင့် လုပ်၍မရသည့် ဒေသအတွင်းရှိ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ကို အသုံးချခြင်းသည် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်ကို ရွေးချယ်ရသနည်း ဆိုလျှင် မိမိတို့နိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် ပမာဏမှာ နိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၃၀% ခန့်သာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် အခြေခံ အဆောက်အအုံတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ဒေသအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်ရေး ဝိုင်းဝန်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ် စူးစမ်းလေ့လာမှု ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ပြီးစီးပြီးဖြစ်၍ မိမိတို့ ပြင်ဆင်ထားသည့် ရေအားလျှပ်စစ် ဒီဇိုင်း အစီအမံများကို တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား အပိုင်း ၁၀-ပိုင်း ခွဲ၍ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှု၊ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှု၊ လမ်းအူကြောင်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ သဘာဝနှင့် လူမှုဝန်းကျင် သက်ရောက်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကုန်ကျစရိတ် နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ရေး အစီအစဉ်များအား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ Projector ဖြင့် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး တင်ပြပါသည်။
ဆက်လက် ဆွေးနွေးရာတွင် MSDES အဖွဲ့သည် တတိယ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းနှင့် မပတ်သက်ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်သူလူထု ကြားတွင် ရပ်တည်ပြီး သမာသမတ်ကျကျ လုပ်ဆောင်သွားမည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည် ဖော်မှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းအကျဉ်း ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူလူထုအတွက် စီးပွားရေး လိုအပ်ချက်များကို တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ MSDES အဖွဲ့၏ သဘာဝနှင့် လူမှုဝန်းကျင် စူးစမ်းခြင်း၊ သက်ရောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုမို ကောင်းမွန်သည့် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိစေရန် စူးစမ်းလေ့လာမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒေသခံ ပြည်သူလူထု ကိုယ်စားလှယ်များ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားပါသည်။
ဦးအောင်နန္ဒမှ ဦးစွာ မိတ်ဆက် အမှာစကား ပြောကြားပြီး ပထမအကြိမ် အဓိကသက်ဆိုင်သူ/ ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားသို့ မအားလပ်သည့်ကြားမှာ တက်ရောက်ပေးသည့် အတွက် ပထမဦးဆုံး အနေဖြင့် ကျေးဇူး တင်ကြောင်း၊ နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ် စစ်စီမံကိန်း အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား ဆန်းစစ် လေ့လာရေး အဖွဲ့ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ မိမိတို့၏ ရပ်တည်မှု၊ မိမိတို့၏ အမြင်ကို ပြောပြချင်ကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အမြင် သဘောထား ဖွံ့ဖြိုးမှုများ လုပ်သည့်အခါ ပစ္စုပ္ပန်အတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသလို အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အတွက် အနာဂတ်တွင် လိုအပ်မည့် လိုအပ်ချက်များ၊ ပစ္စုပ္ပန်ရော အနာဂတ်ပါ ရှေးရှုပြီး ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု နောက်ပိုင်း စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ စီမံကိန်းကို ပြီးစလွယ်လုပ်၍ မရပါကြောင်း၊ စီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝ သယံဇာတကို ဘယ်လို ခြိုးခြံချွေတာစွာနဲ့ ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင် လုပ်မလဲ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်မှု၊ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သဘာဝ သယံဇာတများကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချမှု ဒီအချက်တွေကို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဆောင်ရွက် လာကြရကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍မရပါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုစီးပွား ဒီ ၂-ချက်ပဲ ကြည့်၍မရ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုစီးပွား ပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတ ရှေးရှုပြီး ကြည့်ရကြောင်း၊ ဟန်ချက်ညီညီနှင့် ခြေထောက် သုံးချောင်း ထောက်ထားသကဲ့သို့ တစ်ခုခု ပြိုလဲတာနဲ့ ဟန်ချက်ပြိုပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဓိပ္ပါယ် ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်မှု၊ လူမှုစီးပွား အကျိုးတရား၊ သဘာဝ သယံဇာတ ဒီ ၃-ချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဟုခေါ်ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရပ်တည်ချက်မှာလည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ အချုပ်ကို ပြောရလျှင် ကျွန်တော်တို့ (MSDES) သည် အင်ဂျင်နီယာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အချက် ၃-ချက်ကို ညီညီမျှမျှ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းဘက်ကို လိုက်၍ မရကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရမည့် မျက်နှာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုစီးပွား၊ ပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတ၊ အချက် ၃-ချက် ကိုပဲ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ ယခု အခမ်းအနား အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် တင်ပြလိုကြောင်း ဒေသခံ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ထိုင်နေသည့် စားပွဲပေါ်တွင် အကြံပြုတောင်းခံလွှာ ချထားကြောင်း၊ ဒီအကြံပြု တောင်းခံလွှာမှာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်လျှင် ကောင်းမည်၊ မိမိတို့ သဘောထား စီမံကိန်း အပေါ် အမြင် အကျိုးရှိမယ်/ မရှိဘူး၊ ပြီးရင် ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ဘာလုပ်စေချင်တယ်၊ မိမိတို့ရဲ့ စိုးရိမ်စိတ် သောက၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးပေးပါ။ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒေသခံ ရပ်မိရပ်ဖများ၏ သဘောထား အမြင်ကို လိုချင်၍ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလို ရေးသားပေးတဲ့ အခါ လက်မှတ် ရေးထိုးရန်နှင့် အမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ကျေးရွာအမည်များ ထည့်ပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ESIA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် (၁) အဆိုပြုစီမံကိန်း၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲစနစ်များ၊ လူမှုစီးပွားနှင့် ကျန်းမာရေးတို့ အပေါ် အကျိုး သက်ရောက်နိုင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စိစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ (၂) မကောင်းသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ လျော့နည်းစေရန်နှင့် ကောင်ကျိုးများ တိုးပွားစေရန် နည်းလမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ (၃) အဆိုပြု စီမံကိန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်မည့် ဒေသတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုအား အသိပေးခြင်း၊ သဘောထား အကြံဉာဏ် ရယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်ကြောင်း၊ ESIA လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှုသည် အဓိကကျကြောင်း၊ (၁) ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၊ (၂) အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ဒေသခံပြည်သူများ၊ (၃) တတိယ အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးဦးသုံးဖလှယ် တက်တက်ကြွကြွ ရှိမှသာ ESIA လုပ်ငန်း အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ (Developer) ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အဓိက အကျဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ (Developer) သည် အတ္တ/ပရ ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒေသလူထု အတတ်နိုင်ဆုံး မထိခိုက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးချင်စိတ် ရှိရန်လိုကြောင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့် မလွဲသာ၍ ESIA ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ESIA ၏ လုပ်ငန်း အဆင်ဆင့်တွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ESIA မှ စိစစ် အကြံပြုချက်များ အတိုင်း ဒေသနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးအတွက် လိုအပ်သည်ကို လိုလိုလားလား ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုကြောင်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုရှိရန် တို့ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။
မေး ။ ။ ဦးထောင်းဂန်၊ ရွာသူကြီး၊ နမ့်ပတီးကျေးရွာ
(၁) ချောင်းအောက်ပိုင်း၊ စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း ကျရောက်နေသော နမ့်ပတီးကျေးရွာရှိ လယ်ယာ၊ သစ်တော များအား ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တာဝန်ယူမှုနစ်နာကြေးပေးမှု ရှိမရှိမေးမြန်းလိုပါသည်။
(၂) ချောင်းအောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ကိုင် စားသောက်သည့် နေရာတွင် စီမံကိန်းကြီး ပြီးသွားပါက လုပ်ကိုင် စားသောက်ခွင့် ရှိမရှိနှင့် စီမံကိန်းနေရာအား တားဆီးပိတ်ပင်မှု ရှိမရှိ သိလိုပါသည်။
ဖြေ ။ ။ စိုင်းအုန်းမြင့် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ GHK Public Co., Ltd)
(၁) နမ့်ပတီးကျေးရွာသည် ရေလွှမ်းဧရိယာတွင် ကျရောက်ခြင်း ရှိမရှိပေါ်မူတည်၍ ရလဒ်ရှာရန်လိုကြောင်း၊ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးပြီး ထိခိုက်မှုရှိသည်ဆိုပါက ပြန်လည် ဆွေးနွေးရန် လိုကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
(၂) တမံလုံခြုံရေးအရ လက်ရှိ စိုက်ပျိုးမြေနေရာကို လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် နောင်လုပ်ခွင့် ရှိမရှိ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တမံလုံခြုံရေးသည် တမံဝန်းကျင်ရှိ ၁၇၉ ဧက အတွင်းသာ ကန့်သတ်ထားကြောင်း Register လုပ်ပြီး ဝင်ရောက် သွားလာနိုင်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
မေး ။ ။ ဦးခမ်းလှိုင်ချစ်၊ ရွာသူကြီး၊ ဝိန်းနန်းကျေးရွာ
(၁) ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရေရရှိရေးကို အကူအညီ တောင်းခံ လိုပါသည်။
(၂) ရေဆိုသည်မှာ သောက်သုံးရေနှင့် လယ်ရေရရှိရေးကို တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ ။ ။ စိုင်းအုန်းမြင့် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်၊ GHK Public Co., Ltd)
(၁) ဦးခမ်းလှိုင် အကူအညီ တောင်းခံသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ CSR လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ မည်သို့ပင် ရှိစေကာမှု ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ကွင်းဆင်း တိုင်းတာ ကြည့်ပြီးလျှင် အနေအထား ကြီးမားမှုမရှိဟု တွေ့ရှိပါက လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြီးမားသည်ဆိုပါက စီမံကိန်းပြီးသည့် နောက်တွင် လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြပါသည်။
(၂) သောက်သုံးရေနှင့် လယ်ရေ ရရှိရေးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ Survey အဖွဲ့ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီးပါက ဒုတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြန်လည် တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြပါသည်။
မေး ။ ။ စိုင်းစံအေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တိန်းလုံကျေးရွာ
ပန်ခမ်း၊ တိန်းလုံ ကျေးရွာတွင် လယ်ဧက ၁,၀၀၀-ကျော် ရှိကြောင်း၊ လယ်ရရှိရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိနှင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နည်းပညာပိုင်းတွင် မည်သို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲ၊ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် လယ်ပိုင်ရှင်မှ ပြန်လည် ပေးဆောင်ရခြင်းမျိုးကဲ့သို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိအောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ သိလိုပါသည်။
(၁) လယ်များ တိုင်းတာမည့် ဧရိယာသည် ဝိန်းနန်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ပန်ခမ်းအစရှိသော ဆက်စပ်ဒေသ အားလုံးကို အကုန်တိုင်းတာပေးမည်။
(၂) တောင်ဖက်အပိုင်း ကျသည့်နေရာတွင် စီမံကိန်း (တမံ) နေရာထက် မြင့်သည့် နေရာများ ရှိကြောင်း မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တိုင်းတာပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ယခင်နှစ် မိုးတွင်းကာလတွင် စပါးပင်များ ရှိနေသဖြင့် တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသဖြင့် ယခု ပြန်တိုင်းတားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ရေပေးဝေရေး စနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်ဆိုပါက အချိုးကျ ပါဝင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး ။ ။ စိုင်းအိုက်ပန်၊ ရွာသူကြီး၊ ဟိုပေါ့ကျေးရွာ
လမ်း (Survey) တိုင်းသည့်အခါ လမ်း(Alignment)ကို ကြည့်၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အနေအထားဖြစ်ပါက ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
မေး ။ ။ ဦးအောင်နန္ဒ (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ MSDES Co., Ltd)
ဝိန်းနန်း၊ ဟိုပေါ့ဒေသ အကြောင်းနှင့် သိလိုသည်များ မေးမြန်းလိုကြောင်း၊ ဤဒေသအကြောင်းအား စာများဖတ်၍ လေ့လာသော်လည်း ဤဒေသအကြောင်းကို ရပ်မိရပ်ဖများကသာ အသိဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ရေကြီးခဲ့စဉ် အခါက တင်ကျန်ခဲ့သည့် မျှောပါသစ်ပင်၊ သစ်လုံး အမျိုးအစားအား သိလိုကြောင်း? သဘာဝအတိုင်း အမြစ်ပါပြီး မျှောလာသည့် ပုံစံမျိုးလား ဆိုသည်ကိုသိလိုပါသည်။
ဖြေ ။ ။ ဒေသခံပြည်သူလူထု
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လရေကြီးစဉ်အခါက ချောင်းအတွင်းမျှောပါလာသည်မှာ အမျိုးအစားစုံစွာ ပါရှိကြောင်း၊ အကိုင်း၊ အခက်၊ အပင်၊ အမြစ်များပါသကဲ့သို့ ဖြတ်ထားသည့် အပိုင်းအစများလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ အရေအတွက်တော်တော်များသဖြင့် ချောင်းပိတ်သွားသည့်အနေအထားထိဖြစ်ပြီး ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ပင် ဖြတ်သွားလို့ရကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။
ရွာရှိ အသက်အကြီးဆုံး အဖိုးအဖွားများအား မေးမြန်းလိုကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ရေကြီးသည့် ဖြစ်စဉ်မျိုး ဘယ်နှစ်ခါ ကြုံဖူးသနည်း? ဘိုးဘွားများ ပြောဖူးသည့် စကားများ ကြားဖူး ပါသလား? မေးလိုပါသည်။
ဖြေ ။ ။ အသက် ၅၃-နှစ်ရှိ အဖွားတစ်ဦး
ယခုကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ဖြစ်စဉ်မျိုးကို သက်တမ်းတွင် တစ်ခါမှ မကြုံဖူးကြောင်း၊ အဖေ၊ အမေ၊ ဘိုး၊ ဘွားများလည်း ထိုသို့ ကြုံဖူးသည်ဟု မပြောခဲ့ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားပါသည်။
ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ရှမ်းစော်ဘွားနှင့် ဆက်စပ်သည့် နေရာ ရှိမရှိ မေးမြန်းလိုပါသည်။
ဝိန်းနန်းကျေးရွာတွင် စဝ်နန်းအီ သခင်မ အထိမ်းအမှတ် နေရာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇၀၀-ခန့်က အမွေအနှစ် ရှိခဲ့ပါသည်။ ရွှေသမင်ကျောင်း ဆရာတော်ထံ တင်ပြပြီး ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
မူဆယ်မြို့၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ် စစ်စီမံကိန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပထမအကြိမ် အဓိက သက်ဆိုင်သူများ/ ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် လာကြသော ဒေသခံ ပြည်သူများ အနေဖြင့် စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်၍ ဆွေးနွေး အကြံပြုချက် သဘောထားများ ရေးသားပေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။